HPF yakateedzana yegungwa horizaontal ndiro yefriji, China HPF dzakateedzana marine horizaontal ndiro furiza Vagadziri, Vatengesi, Fekitori - Square Technology Boka Co, Ltd.
Rudzi urwu rwe yakatenderera tafura yefiriji inonyanya kugadzirirwa kushandiswa kwegungwa. Mafiriza akadaro anogona kushandiswa kutonhodza zvigadzirwa zvakasiyana mumatireyi, mapani nemabhokisi, anokodzera hove dzegungwa, nyama ine zvinhu zvidiki uye zvimwe zvekudya mumablock.
● Inogona kushandiswa kumahombekombe kana kumahombekombe.
● Iyo firiji inogona kuve Freon, Amonia kana CO2
● Yakagadzirwa kubva pagungwa remvura inodzivirira Aluminium, giredhi rekudya. Iyo 25mm gobvu Square aluminium ndiro inopa yakasimba simba, yakakwira ngura kuramba uye kupisa kwemagetsi. Ndiro iri otomatiki welded uye ane shoma deformation.
● Iyo yakakomberedzwa yeplate ndiro girazi isimbi isina simbi. Inogona kuona nharaunda yakaoma yegungwa uye nyore kuchenesa.
● PTFE Inodonha-yemahara inochinjika Hose majoini, flanged kana tambo kubatana. Iyo payipi yakafukidzwa ne304L Stainless simbi chirukwa.
Model L W H mhando L W H Model L W H
Ukobvu evaporative mahwendefa: 25mm; Kureba pakati pamahwendefa: 40-90mm
* Rondedzero yacho ndeyekuchinja pasina ziviso, ndapota nyorera mutengesi usati waiswa odha.
* Yakagadzirirwa dhizaini inowanikwa kune chaiyo inodiwa.